के तपाईं AdSense को साथ एफिलिएट मार्केटिंग गर्न सक्नुहुन्छ? - Learn Expert Blogging
Post category:Adsense / एफिलियट मार्केटिंग / Earn Money Online
तपाईं निश्चित रूपमा एफिलियट मार्केटिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ AdSense सँगै तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटमा. यो तपाइँको ब्लग मुद्रीकरण सुधार गर्न को लागी एक उत्तम तरिका हो. तपाईं दुबैको फाइदा लिइरहनुभएको छ, तपाईको आफ्नै वा अन्य व्यक्तिको उत्पादनलाई बढावा दिएर कमिसन प्राप्त गर्नका साथै विभिन्न ब्यानर आकार विज्ञापनहरू प्रदर्शन गरेर पैसा कमाउने.
गुगलले आधिकारिक रूपमा तपाईंलाई प्रदर्शन विज्ञापनको साथ तपाईंको उत्पादन पदोन्नति लिंकहरू सम्मिलित गर्न अनुमति दिन्छ. यहाँ स्क्रीनशट छ.
मेरो आफ्नै अनुभव साझा गर्दै, जब मेरो ब्लग लामो समय पछि सुरू भयो, म केवल AdSense मा मात्र सीमित गर्छु. समय बित्दै जाँदा, as I improved my knowledge and getting better in the blogging field.
चाँडै मैले महसुस गरे, तपाईं एक विशाल AdSense को माध्यम बाट पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ 5000+ प्रतिमहि डलर यदि तपाइँसँग लाखौं गुणस्तर ट्राफिक छ र यो अमेरिकाबाट हुनुपर्दछ, बेलायत, क्यानडा देशहरू मन पराउछ.
म शुरुको अवस्थामा थिएँ, यति धेरै संख्यामा आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न निकै गाह्रो थियो.
AdSense र अमेजन, उही वेबपेजमा अन्य सम्बद्ध विज्ञापनहरू
सम्बद्धको साथ Adsense
सम्बद्ध मार्केटिंग र अन्य विज्ञापन नेटवर्क -AdSense वैकल्पिक
त्यस समयमा म मेरो ब्लगि earn्ग कमाई सुधार गर्न अन्य विकल्पहरू हेर्न सुरू गर्छु. त्यहाँ मैले फेला पारे आधिकारिक गुगल मद्दत पृष्ठ AdSense का साथ सहबद्ध विपणनको अनुमतिको व्याख्या गर्नु नीतिको त्यस्तो कुनै उल्ल violation्घन होईन चाहे अमेजन वा अन्य सम्बद्ध कम्पनीहरूसँग काम गरिरहे पनि।.
तेस पछि, म तत्काल अमेजनको सम्बद्ध कार्यक्रमको लागि साइन अप गर्छु. त्यस समयमा मेरो ब्लगले केवल सीमित संख्यामा आगन्तुकहरू प्राप्त गरिरहेको थियो जुन निश्चित रूपमा AdSense बाट सुन्दर कमाई गर्न अस्वीकार्य हो।.
यहाँ पनि, यदि तपाई यस बोगिंग फाँटमा शुरुआती हुनुहुन्छ भने म तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन्छु, AdSense मा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, तपाइँ एफिलियट मार्केटिंगबाट सुरु गर्नुपर्दछ. त्यसपछि, धेरै महिना पछि AdSense मा शामिल हुनुहोस् जब तपाइँ दर्शकहरूको पर्याप्त संख्या प्राप्त गर्न सुरू गर्नुहुन्छ.
तपाईं AdSense का साथ सम्बद्ध कमाई तुलना गर्न सक्नुहुन्न. एफिलियट मार्केटिंग फलफूल उद्योग हो जुन तपाईंलाई कमाउनको लागि अनुमति दिन्छ 1000 + डलर सजिलै तपाईं यातायात को एक सानो राशि संग हुनेछ. यहाँ मात्र पैसा कमाउने मेरो व्यक्तिगत प्रमाण छ 100 प्लस यातायात प्रति दिन.
तपाईं यो जान्न चकित हुनुहुनेछ कि यदि प्रति महिना केवल एक सय आगन्तुकहरू मेरो वेबसाइटमा भ्रमण गर्छन् जबकि त्यहाँ कमाउनको कुनै मौका छैन $70 AdSense मार्फत प्रति महिना.
यद्यपि, यो AdSense को अनुमोदन प्राप्त गर्न र यसको साथ सम्बद्ध विपणन गर्न बुद्धिमानी निर्णय हो. किनकि तपाईले केहि गुमाउनु भएको छैन बरु तपाईले बढि डलर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ. केही फरक पर्दैन वा धेरै.
अर्को कुरा तपाईंले यहाँ विचार गर्नुपर्दछ तपाईंको वेबसाइटको गति. तपाईंले आफ्नो वेबसाइट ढिलो राख्नु हुँदैन. अतिरिक्त जाभास्क्रिप्ट एडसेन्स कोड थप्नका साथै कुनै सम्बद्ध मार्केटिंग उत्पाद HTML कोड थप्नमा, दुबैले वेबसाइट खोल्ने समय बढाउँछन्. यसले निश्चित रूपमा तपाईलाई हानी पुर्‍याउँछ. वेबसाइट गति अब एक दिन गूगल को क्रमबद्ध कारक को एक बारे मा सचेत हुनु पर्छ.
आजको एड्सेन्स पहिलेका वर्षहरू जस्तो कहिल्यै थिएन, तपाईंले मासिक आधारमा राम्रो राजस्व कमाउनमा धेरै मेहनत गर्नु पर्छ. गुगल एड्सेन्स गुगलको उत्पाद हो. यो यति स्मार्ट भएको छ कि यसको लागि धेरै प्रयास र बदलामा आवश्यक छ, तपाईं हाल एक सय प्रतिशत प्राप्त गर्नुहुनेछ.
यसको वरिपरि के भइरहेको छ? राम्रो, स्पष्टीकरण धेरै छन् तर यहाँ म तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन्छु Ezoic को लागी साइन अप गर्नुहोस्.
इजोइक एडसेन्समा उस्तै प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो जुन AdSense कोड प्रदर्शन गर्न यसको स्मार्ट कृत्रिम बुद्धि प्रविधि प्रयोग गर्दछ. Ezoic बाट अनुमोदन प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले AdSense का सबै नीतिहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ र यसको अनुमोदन हुनुपर्दछ. यदि तपाईंसँग छ भने तपाईं स्वत: Ezoic विज्ञापनहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ.
त्यसोभए EZOIC र AdSense कमाई बीच के भिन्नता छ, मलाई एक उदाहरणका साथ स्पष्टीकरण गरौं. मानौं यदि तपाई पाउनु भएको छ 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका बाट पृष्ठ विचार, AdSense को मामला मा, तपाईं हाम्रो बारेमा मात्र हुनेछ $5 प्रति हजार हेराईहरू जबकि यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा Ezoic विज्ञापन लागू गरेको छ तपाइँको लगभग हुनेछ 10 लाई 12 डलर धेरै सजीलो भन्दा बढी हुन सक्छ.
यदि तपाईं ड्राइभिंगमा सफल बन्नुहुन्छ भने 50000 पाहुनाहरुलाई 100000 प्रति महिना पृष्ठ दृश्यहरू तब तपाईं सजिलैसँग अधिक सुधार गरिएको प्लेटफर्महरूमा जान सक्नुहुन्छ मिडिया आउँदैछ वा Adthrive. यी दुई अन्य प्लेटफर्महरू वास्तवमै तपाईंको अपेक्षाहरू भन्दा टाढा छन्.
कुल मिलाएर, यदि तपाइँ दुबै AdSense बाट साथै सम्बद्ध मार्केटिंग मार्फत पैसा कमाउने तरिका बनाउनुहुन्छ भने यो प्रशंसनीय छ. तपाईं यसलाई कुनै पनि उल्लंघन बिना ब्लग वा वेबसाइटमा चलाउन सक्नुहुन्छ. यसको साथ, तपाइँले एडोसेन्स विकल्पहरू पनि विचार गर्नुपर्दछ इजोइक, मिडिया बेल र विज्ञापन फस्टाउँछ, आदि. यो अधिक लाभदायक साबित हुनेछ र तपाईंलाई निराश कहिले पनि गर्दैन.
Google AdSense को साथ तपाईं कत्ति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ
के म डोमेन नाम किन्न सक्छु र यसलाई कहिँ पनि प्रयोग गर्न सक्छु?
Previous PostGoogle AdSense को साथ तपाईं कत्ति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ?